Nchekwa - AOOD Technology Limited
A na -achọwanye usoro nchekwa ọgbara ọhụrụ na ngwa ụlọ ọrụ, azụmahịa na ngwa agha dị ka nchekwa azụmaahịa na akụrụngwa, nchekwa njem na ọhụụ abalị, ịnya ụgbọ mmiri, onyunyo mgbanyụ ọkụ, nyocha ndị agha & nchọpụta & nsuso. Iji nweta onyunyo & nweta ebumnuche na ebumnuche nsuso, ekwesịrị ịwụnye sistemụ vidiyo dabara ka ewepụta ihe onyonyo ma ọ bụ ndekọ. N'etiti sistemụ vidiyo ndị a ọkaibe, a na -agafe ike, akara na data niile site na sistemụ mgbanaka mịpụ. Ọ na -enye nnyefe na -enweghị njedebe 360 ​​° nke nnukwu onyogho ma ọ bụ ndekọ site na mpaghara rotary gaa na nke edobere ma zere eriri gbagọrọ agbagọ mgbe ọ na -atụgharị. Ọ bụ ya mere sistemụ vidiyo modem ji bụrụ ngwa a na -achọkarị nke mgbaaka mgbapụ.
Ngwaahịa emetụtara: Capsule Slip Mgbaaka, Mkpuchi Mkpuchi Nkọwa Dị Elu, Ihe mkpuchi mgbaaka Ethernet